सुरक्षा गार्डहरूले डीलरशिपका लागि लाभ प्रदान गर्दछ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी मार्केटप्लेस समाचार
11 सक्छ, 20219सक्छ, 2021 जेम्स श्रीइडर ब्लग, विशेष समाचार
संयुक्त राज्य अमेरिका भरि चोरी भएका भागहरूको लागि बृद्धि भएको कालो बजार छ।
प्रत्येक चोरी कन्भर्टर लगभग २$० डलर ल्याउँछ, यसैले १२ प्लस रूपान्तरणहरू जुन एकल हिटको अवधिमा सजिलैसँग लिन सकिन्छ, अपराधीहरूको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ।
यसले स्प्रे पेन्ट, टुटेको विन्डोज / विन्डशील्डहरू, र स्ल्याश टायर जस्ता तोडफोडको मुद्दा सम्बोधन गर्न शुरू गर्दैन जुन नयाँ सवारीहरू नष्ट गर्नमा बाधा पुर्‍याउने झुकाव हो।
यदि तपाईंले अटो डीलरशिप उद्योगमा प्रबन्धकको रूपमा वा व्यवसायको मालिकको रूपमा काम गर्नुभयो भने, तपाईं चोरी र बर्बरताका अपराधहरूको सामना गर्न बिरामी हुनुहुन्छ। यी दुई समस्याहरू धेरै डिलरशिपमा सामान्य छन् उच्च डलर सम्पत्तिले गर्दा सबैमा ठुलो रूपमा पार्क गरियो। यसैले, तपाइँ आपराधिक गतिविधि हुन्छ जब पछि ह्यान्डल को अप्रिय कार्य संग छोडिन्छ।
चोरी हुनको लागि सब भन्दा सामान्य समय बेलुकाको समय हो, राती जब कुनै कर्मचारी डिलरशिपमा हुँदैनन्।
डीलरशिप चिट्ठाले मूर्ख बच्चाहरूलाई केवल केहि भंग गर्न चाहान्छ, जो पार्क गरिएको कारबाट पार्ट्स चोर्छ, वा जसले गाडी चोर्ने प्रयास गर्छन् उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्दछ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, डिलरशिप महँगो गाडीहरूको भरिएको छ जुन खुला पार्किंगमा बतखहरू बसिरहेका छन्। तसर्थ, तिनीहरू अपराधीहरूका लागि अत्यन्त आकर्षक ठाउँहरू हुन्। तपाईको सम्पत्ति र कर्मचारीहरूलाई बचाउनको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका भनेको साधारण डिलरशिप अपराध र लाभ सुरक्षा गार्डहरु यस मुद्दालाई कम गर्न प्रदान गर्न सक्दछ।
डीलरशिप अपराधको सामान्य प्रकारहरू बुझ्दै
संयुक्त राज्य अमेरिका भरि चोरी भएका भागहरूको लागि बृद्धि भएको कालो बजार छ। अपराधीहरूले लिने सबैभन्दा लोकप्रिय वस्तुहरू मध्ये एक उत्प्रेरक रूपान्तरण हो। अनुभवी अपराधीका लागि हटाउने प्रक्रिया छिटो र सजिलो छ, परिणामस्वरूप एक मात्र हिटको क्रममा ठूलो मात्रामा चोरी भएको छ।
प्रत्येक चोरी कन्भर्टर लगभग २$० डलर ल्याउँछ, यसैले १२ प्लस रूपान्तरणहरू जुन एकल हिटको अवधिमा सजिलैसँग लिन सकिन्छ, अपराधीहरूको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ। यद्यपि ब्रान्ड-नयाँ उत्प्रेरक कन्भर्टरको लागत (चोरी भएकाहरूलाई बदल्नको लागि) डिलरशिपलाई हजारौं डलर खर्च हुनेछ। यसैले, जब धेरै उत्प्रेरक रूपान्तरणहरू एकैचोटि stollen हुन्छन्, डीलरशिपको लागि लागत चरम हुन्छ।
विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो, जब ग्राहकको सवारी सेवा सेवाको लागि तपाईंको चिठ्ठीमा हुन्छ र चोरीको अशुभ शिकार बन्छ। डीलरशिपले ग्राहकलाई तुरुन्त पार्नु पर्छ, चोरीसँग सम्बन्धित मर्मत पूर्ण गर्नुपर्दछ, र सम्बन्धित लागतहरू अवशोषित गर्नु पर्छ।
समस्याहरूको अर्को सेट देखा पर्दछ जब चोरीको लामो अवधिको लागि पत्ता लगाइयो। यो अक्सर चीजहरूको प्रयोग भएको वाहन पक्षमा देखा पर्दछ र पछि गाडी पत्ता लगाईन्छ जब गाडी चालित छ र uncharacteristically चर्को स्वर लाग्दछ। किनभने किनभने उत्प्रेरक रूपान्तरण गर्ने केहि अंशहरू हटाउँदा तुरून्त देख्न सकिदैन, किनकि गाडी अझै खुला रहनेछ।
यस्तो हुन सक्छ कि तपाईंको व्यवसाय बीमा नीतिले यस प्रकृतिको चोरीलाई कभर गर्दिन, वा कमसेकम दाबीहरूको निश्चित संख्या पछि क्याप आउट गर्दछ। यस प्रकारको चोरी यति धेरै बारम्बार हुने भएकोले बीमा कभरेजको अभाव अत्यन्त समस्यापूर्ण हुनेछ।
डीलरशिप चिट्ठाले मूर्ख बच्चाहरूलाई केवल केहि भंग गर्न चाहान्छ, जो पार्क गरिएको कारबाट पार्ट्स चोर्छ, वा जसले गाडी चोर्ने प्रयास गर्छन् उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्दछ।
सुरक्षा गार्डहरूले मद्दत गर्न सक्छन्
चोरी हुनको लागि सब भन्दा सामान्य समय बेलुकाको समय हो, राती जब कुनै कर्मचारी डिलरशिपमा हुँदैनन्। केहि डिलरशिपले सुरक्षाको लागि क्यामेरा र मोशन एक्टिवेटेड लाइटहरू प्रयोग गर्दछ, जुन चोरी रोक्न धेरै हदसम्म प्रभावहीन हुँदैन। यो किनभने अन्धकारको कफनमा चोरहरूले आफ्नो अनुहार र इजाजतपत्र प्लेट क्यामेराबाट लुकाउन सक्छन्, मास्क र अन्य कालो लुगा लगाउन सक्दछन् र कुनै पहिचान नगरी अपराध गर्न सक्छन्। भिडियो फिडहरूले कार्य समात्न सक्छ तर अपराध रोक्दैन। तसर्थ, अपराधको गुमनामीकरणको साथ जोडी बनाइएको, तपाईंलाई अपराधीलाई पक्रन कहिले गाह्रो हुन्छ।
सुरक्षा गार्डहरूले रातको समयमा तपाईंको डीलरशिपमा शारीरिक उपस्थिति भएर यी मुद्दाहरूको बारेमा कम गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले रातभर अनियमित गश्ती गर्न, चोरी रोक्न, र आपराधिक कार्य गर्न कोशिस गरिरहेकाहरूलाई पक्रन सक्छन्।
सुरक्षा गार्डको लागत अपराधलाई निरुत्साहित गरेर र अपराधीहरूलाई तपाईंको मूल्यवान सामानहरू लिएर भाग्नु भन्दा पहिले रोक्दै यसको लागि भुक्तानी गर्नेछ। उल्लेख गर्नु पर्दैन, यसले तपाईंको बीमा दरहरूलाई कम दावीहरूको कारण कम रहन मद्दत गर्दछ। के यो तपाइँ समय होईन? सुरक्षा गार्डको सहयोगमा तपाईंको डिलरशिप सुरक्षित गर्नुभयो?
सांप्रदायिक समाचार डीलरशिप सुरक्षा
जुम्ल्याहा शहर सुरक्षा डेन्भरमा सुरक्षा सल्लाहकार। हामी तपाईंको बहुमूल्य सम्पत्ति र व्यक्तिहरूको रक्षा गर्न उच्च प्रशिक्षित गार्डहरू प्रस्ताव गर्दछौं।